Markaad Geel Leedahay baa Geel-jire la Samaystaa
Mar mar waxaa la maqlaa wasiir aan wasaarad lahayn (minister without portfolio) laakiin yaa arkay wasiirro dowlad dhan oon wasaarado lahayn? Laga soo bilaabo 1991 ilaa 2004 imisa wasiir baa la sameeyey? Intooda badan, muddadaas, xafiis ma gelin sidoo kalana xaashi wasaaradeed ma saxiixin! Sidaasooy tahayna waxay “CV” ku qortaan inay wasiirro ahaan jireen?
Buug yar oo cinwaankiisu ahaa “ Introducing Sociology” ooy qoreen Richard Osborne iyo Borin Van Loan ayey waxay bog ka mid ku xardheen: bal suurayso haddii cunug yar oo sabool ah weliba aan helin waxbarasho fiican uu dhagax ku jabiyo daaqadda guriga Weber (waa nin cilmigaas ku dheereeyey); dabadeedna Weber weydiiyo cunugaas waxa arrintaas ku kallifey oo uu cunugu yiraahdo waan ku raaxeysanayaa. Dabadeedna Weber dhaho ma arrintaas baa sabab u ah inaad sidaas yeesho? Oo haddana wiilku dhaho mayee waxaan sidaas u yeelay Smith (waa nin ka shaqaysta dayactirka daaqadaha). Maxaa yeelay lacag buu i siiyey; wuxuuna ii sheegay inaan daaqaddaan arkaba jabiyo! Dagaal-oogayaasha aan u haysanno inay dhibkeenna ku raaxaysanayaan waa niman Zenawi ama cadow kale dabada ka wadaan oo sida wiilkaas yar, dan gaar ah iyo shilin raadis ah.
Waxaa la sheegay in dekedda Xamar laga cayrshay doon wadday dhar iyo wax la mid ah. Dagaal-oogihii arrintaas geystay markii la weydiiyey sababta uu saas u yeelay wuxuu yiri: xaq uma leh in hal kooxi ay hantida qaranka siday rabto ka yeesho. Ma xuma laakiin yaa khasaaraya. Keliya qolo ayuu xooggaa ka afqabtay oo wuxuu naas-nuujiyey qolyaha leh dekedda ceelmacaan. Laakiin haddii dharkaas laga dejin lahaa dekedda weyn ee Xamar wuxuu suuqa ku tagi lahaa qiimo ka jaban kan marka laga dejiyo tan ceel-macaan sababo iska cad owgood.
Maalin hore waxaan maqlayey fannaanniin Xamar joogta oo diyaarinaya barnaamij ay ku soo dhoweynlahaayeen “dowladda cusub”. Runtii ma hubo in barnaamijku yahay mid waddaninimo ku saabsan iyo inuu yahay “nooloow maddaaloow”. Laakiin waxaa noo xigtay dowladdiiba dhacday! Maba dhalane dhici ogaa? Haddii hees laga horqaadayo “dowladda” waxay ku fiicnayd in Xasan Aadan Samatar ka horyiraahdo:
Markaad geel dhaqatid baa
Gaawaha loo soo cushaa
Gacmaha yeydiin ku jira
Ma qaran-dhis iyo dowlad-dhis baa la isku khalday
Soomaalidaa tiraahda Ilaahoow eexna hanooga tagin; aqoon la’aanna hana cadaabin. Maaddaama aqoontaan naqaanba tahay qabiil iyo eex waxaan Ilaah ka baryeynaa inuu mar kasta noo dambi dhaafo. Akhristayaal anigu siyaasadda iyo culuunta bulshada midna wax kama aqaan laakiin waxaan sheegayaa wixii laga filayey qof kasta oo iskuul soo dhigtay ama fidrada ku taagan. Waa sidii Soomaalidu u tiri: hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa. Marka dhib ma leh haddii aqoonyahanno hadal loo jeediyo.
Haddii dowlad dimuqraadi ah sida kuwa Yurubta Galbeed, Australia, Maraykan iyo kuwa kalaba, laga guuleysto xisbigeeda talada haya waxaa dhacda in xisbiga cusubi soo dhiso dowlad cusub. Haddaad rabto dheh gole wasiirro. Maxaa yeelay qarankii baa dhisan. Howlihii qaranku waa socdaan inta doorashadu socoto iyo weliba inta dowladda cusubi xukuumad dhisayso. Dowlad-dhisku dimuqraadiyadda kaliya kuma koobna ee xitaa ninkii qaran dhisan, dowladdiisa afgambiya, waxaa suurtogal ah inuu dowlad cusub dhiso maxaa yeelay qaranku waa bad qabaa. Tusaale usoo qaado Kacaankii 21-ka Oktoobar. Maxamed Siyaad si aan dhiig ku daadan buu taladii ula wareegay. Inkastoo waddanku dambeeyey haddana waxuu gacanta ku dhigay hannaan dowladeed oo shaqaynaya; isna halkaas buu ka miisay. Xitaa Zenawi wuxuu dhisay dowlad maxaa yeelay burbur weyn kuma dhicin Itoobiya.
Weligiin ma aragteen guri tarniigiis iyo alwaaxdiis oo isku dheggeni hawada ka taaganyihiin iyadooyna jirin darbi ama wax kele oo celinaya? Kollay anigu ma arag. Waxaan uga danleeyahay oo aan aamminsanahay in aan qaranka sida dowladda loo dhisin. Qaranka sida haanta iyo masafta ayaa gunta laga soo bilaabaa. Maxaa “dowladda” Soomaaliyeed ee Mbagathi loo dhahaa dib-u-dhis haddaan dowlad-dhis ka wadno?
Wasiirka marka la dhisayo waa in wasaarad iyo shaqaalaheedii jiraan. Bal tusaale u soo qaado wasiirkaad rabto, dowladdii Geeddi. Markaan qof uma dan lihi laakiin bal tusaale usoo qaaddo wasaaradaha muhiinkaa sida waxbarashada iyo caafimaadka. Bal ka warran wasiir waxbarasho oo raba inuu huteel dego halka iskuuladii ay xaasas iyo reero degenyihiin?! Wasiirku ma xaasas iyo dhallaan rag buu rabaa inuu xukumo?
Ilaah baan idin ku dhaarshe ka warrama labo “ra’iisulwasaare” oo isku heysta anaa xilka wareejin iyo anaa wareejin?! Ma Huteelo dadoow bay dowladda ku wareejin ileyn wasaarado jira ma ogine? Sidaan xal u arko hoos baan ku qori doonaa haddii Ilaah idmo ee aan u galo “xildhibaannada wada xil-doonkaa”.
Sidee laga yeelaa xildhibaannada kulligood xil-doonkaa?
Maaddaama ay xildhibaannadu garabkeenna ka baxeen oo noo keeneen madaxweynaha aan wax ka sheego sidii iyaga lagula xaali lahaa.
Waxaa la yiraahdaa: seddex boqol ma lacag baa? Saajinnimo ma derejaa? Suub baleyn ma maraq baa (Plain soup)? Waxaan kornaylka kula talin lahaa inuu yeelo sidii makhaayadaha Xamar ee muufada laga cunijiray yeeli jireen. Waxay dabka saari jireen fuusto gobolo biyo ka buuxaan dabadeedna waxay ku ridi jireen lafaha geela iyo lo’da ee kawaanadu hilibka ka dhamaystaan ee haddii kale la tuuri lahaa. Waxaa loogu roonaan jiray cusbo/milix. Qofkii ku soo aada karka hore ee lafaha waxaa dhici kartay inuu xoogaa dux (dhuux) ka helo laakiin ilaa habeyn-barkii, mar kasta oo maraqaas/beylkaas sii yaraadaba waxaa lagu shubaa tanag biyo ah iyo cusbo. Marka qofkii casho raba waa inuu gato suqaar, busteeki iyo hilib kale, moos iyo saliid macsaro. Haddaadan intaas heli karin waa inaad muufada guriga la aaddaa si aad shaah iyo saliid caddeey ugu cuntid laakiin suubaleyn kaliya cidna iskuma deyi jirin. Haddii beylka laguu keenay muufada kuu qoyn waayo waxay ku xirnayd sida aad wax u fahanto. Haddaad dhegdheer tahay ama aad kuleylka ka heshid waxaad dalbanaysaa “maraq” kale haddii kale oo cusbo meelaha ka agdhowdahay waxaad muufada ku qoynaysaa biyaha caadiga ah ee hortaada yaal ilayn labada biyood kuleylkaa u dhaxeeyee; weliba haddaad degdegsan tahay waxaa la qaataa kuwa qaboow. Habeynkaas oo dhan, dadku wuxuu ka fulaa “maraqaas”.
Hadda waxaan kornaylka kula talin lahaa inuu sameeyo 135 wasiir iyo 135 wasiir-ku-xigeen dabadeedna ha ugu qeybiyo 4.5. Oo ma wasaarado la’aan baa jirta? Ma filayo. Aniga waxaan weli ii muuqan wasaarado muhiim ah sida kuwa:
· Wasaaradda la Dagaalanka Argagixisada
· Wasaaradda u Adeega Itoobiya
· Wasaaradda Meydiga iyo Fooxa
· Wasaaradda dib-u-heshiisiinta SRRC, Samatobixinta iyo SSDF
· Wasaaradda saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Maraykanka
Shanta qof oo soo hartana haka dhigo wasiirro-dowlayaal. Qolo kasta mid bay helaysaa ilayn qof lama kala bari karee!
Faa’iidada arrintaas ku jirta waa ra’iisulwasaaraha oon u baahnayn meel wasiirrada lagu shirayo oon ka ahayn xarunta baarlamaanka ileyn kulligood waa wada wasiirree! Markaan afarta qolo oo waaweyn midkiiba wuxuu helayaa 30 wasiir, 30 wasiir ku-xigeen iyo hal wasiir dowle. Ma filayo in dowladda Geeddi mar dambe la hor istaagi doono haddii sidaas loo dhiso. Waqtigaan ra’iisulwasaaruhu ma cayimayo wasaaradaha qolo kasta wasiirro looga dhigay.
Xalka, Siday Ila Tahay
Waxaa la sheegaa in wiil imtixaan ku jiray oo ka qishayey gabar u dhowayd uu xitaa magaceedii ku qortay meeshii uu magaciisa ku qori lahaa! Waxaa taas ka dhigan haddii sidii Bush maamulkiisa u dhisay aan rabno inaan qaran u dhisno. Sidaan horay u iri waa in qaranka hoos laga soo dhisaa. Tusaale haddii la rabo in dekedda iyo garoonka Xamar la furo, ma wasiirka gaadiidka cirka, dhulka iyo dekedahaa la magacaabaa? Bal suurayso wasiir Puntland ka yimid oo jagadaas loo magacaabay; muxuu samayn karaa? Ma iska daawanayaa?
Hadduusan ra’iisul wasaaruhu ka fursanayn inuu gole wasiirro magacaabo waxaan ku talin lahaa inuu qabiil kasta tirada wasiirrada ay helayaan u sheego dabadeedna ku dhaho waa inoo markii qaranku dhismo oo aan idiin diyaariyo wasaarado iyo shaqaale aad xukuntaan. Inta waqtigaas la gaarayo sida dadka caadiga ah ayey dhinac ka galayaan dib-u-dhiska waddanka. Marka markii la rabo in deked ama garoon diyaaradeed la furo waxay ku fiicantahay in uu ra’iisul wasaaruhu xulo guddi ka kooban odayo-dhaqameed, siyaasiyiin, culumaa’u-diin, aqoonyahanno dabadeedna yiraahdo waxaan idin ka rabaa inaad howshaas gashaan. Mar horaba maleeshiyooyinkii meelahaas xukumay waxay dhaheen diyaar baan u nahay inaan wareejinno. Markay wareejiyaan, ma in wasiir la dhiso baa loo baahanyahay? Ma filayo, ee waxaa loo baahanyahay in la qiimeeyo waxa soo gaaray goobahaas; Imisa dhaqaale ayaa lagu dayactiri karaa? Adduunkii isbedelye maxaa lagu kordhin karaa? Markaas ka dib waxaa la gudageli karaa in la helo dad yaqaan shaqada dekedda iyo Garoonka sida kuwii hore haddii cidi ka nooshahay oo ay weli shaqayn karaan: kuwii canshuuraha ku shaqada lahaa, kuwii socdaalka, kuwii diyaaradaha iyo maraakiibta hagi lahaa; kabtanadii diyaaradaha iyo maraakiibta, kuwii nadiifin lahaa iyo weliba kuwii waardiyeyn lahaa. Markii guddigaasi intaas u diyaariyaan, ra’iisul wasaaraha wuxuu samaynkaraa inuu wasiir magacaawdo ilayn shaqaale iyo meel shaqo lagu qabto ayaa diyaar ahe.
Qolyaha cilmiga bulshada yaqaan waxay leeyihiin geedku wuxuu u baahanyahay ciid, biyo iyo hawo; haddii mid la waayo geedkaasi ma baxayo. Ka dhig wasiirka geed; haddaan wasaarad (hawo) iyo shaqaale (biyo) loo hayn sidee u bixin? Haddaad i rumaysan weydaan bal waraysta wasiirradii la dhisay intii u dhaxaysay 1991- 2004. Imisaa baxday? Sidoo kale waa iyada la dhaho dooni biyo la’aan ma socoto marka C/hi iyo Geeddii, wasiir aan wasaarad iyo shaqaale heysan ma shaqeeyo.
Hadday khasab tahay in xaaladdaan lagu jiro wasiirro la sameeyo waxaan anigu ku talin lahaa in la sameeyo wasiirro yar oo sidii ay siyaasiyiin iyo aqoonyahanno horaba sheegeen ka yar toban. Maxaa yeelay dowladdu waxay samayn kartaa ilaa dhowr tiir oo shub ah (wasiirro adag) oo ay taagato dabadeedna saarato jiingad/laamiyeeri/tarniig inta dabriga iyo dabakhyada dhexe (qarankii) la buuxinayo. Waa arrin la samayn karo haddaan laga fursanayn. Qabiil kasta hal wasiir iyo hal kuxigeen halaga soo qaato.
Haddii taladaas la diido waxaa dhici karta inay dhacdo sidii Yamyam jacburka ku yiri:
· Kursigiisii Yaaqshid bay niman u qaateene
· Ganbar iyo ma darin buu sitaa
· Meeshu waa ebere.
Ugu dambeyntii waxaan kula talin lahaa ciddii ra’iisul wasaare loo doorto in ay baarlamaankooda Xamar la aadaan dabadeedna wasaarad kasta sidii aan dekedda iyo garoonka ka niri lagu sameeyo.
Afeef: Aragtida qoaalkanw axaa lehqoraaga ku saxiixan